Mpanao gazety Ekoadaoreana voaroaka noho ny sioka manitsinitsy · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 02 Septambra 2015 4:47 GMT
Pikantsarin'ny kaonty Twitter an'i Martín Pallares, mpanao gazety.
Voaroaka tao amin'ny gazety El Comercio, niasany nandritra ny 13 taona, tamin'ny 17 aogositra noho ny kaonty Twitter-ny ny mpanao gazety Martín Pallares. Araka ny filazan'ny fikambanana mpandala ny fahalalaham-pitenenana Fundamedios dia be fitsikerana ny governemanta Ekoadoreana i Pallares ao amin'ireo sioka ataony.
Mpanao gazety ao Ekoadaoro voaroaka noho ny fanehoan-kevitra fanaony ao amin'ny Twitter
Nilaza tamin'ny fomba ofisialy ny gazety fa ny fandroahana azy dia vokatry ny tsy firaharahiany ny “fangatahana ampitiavana” natao volana maro lasa izay “hanaovany ny fomba tsara indrindra amin'ny taridalana ao amin'ny tambajotra sosialy.” Ao amin'ny kaonty Twitter-ny ananany mpanjohy 15.800 no anambaràn'i Pallares, “Ny zavatra soratako eto dia andraikitro manokana ary tsy misy ifandraisany amin'ny mpampiasa ahy.”
Nilaza matetika momba ilay mpanao gazety ny filoha Ekoadoreana Rafael Correa nandritra ny kabary ho an'ny firenena fanaony isak'asabotsy. Araka ny tatitra fanaon'ny tambajotram-pahalalaham-panehoankevitra IFEX’ isan-taona tamin'ny 2013, “Im-polo farafahakeliny ny filoha Correa no nampiasa mpamaritra tahaka ny ‘lehilahy marary, mpamono olona an-dranomainty, misy fahavoazana, sns’ rehefa manondro ilay mpanao gazety.”
Tao amin'ny antsafa nifanaovana tamin'ny blaogin'ny Knight Center for Journalism in the Americas, [Ivontoeran'ny fanaovan-gazety Knight ao Amerika manontolo] i Pallares no nitantara indray ny fandroahana azy sy ny zavamisy atrehin'ny media ao Ekoadaoro :
Mirotsaka kokoa amin'ireo raharaha any Venezolà na Kiobà ny firaisamponina iraisampirenena, angamba noho ny fanintonana ataon'izy ireo eo amin'ny sehatra iraisampirenena.Efa mihamahazo fifantohana ny toe-draharaha Ekoadaoreana, saingy mieritreritra aho fa tokony hanampy ny mpanao gazety rehetra ny fikambanana iraisampirenena satria tsy izaho irery io, nisy ihany koa ireo hafa efa nitsikera ary dia voaraoka tany amin'ny sehatry ny gazety nisy azy.
Tonga ny fandroahana azy rehefa nomen'ny firenena latsaka ankaterena lalana ny fanampenambavan'ny fifandraisana ka anisan'izany ny media sosialy, izay nambara noho ny fipoahan'ny volokano Cotopaxi, izay niterka ny famindra-toerana ireotanàna manodidina azy. Tamin'ny tapaky ny volana aogositra ihany koa ny governemanta dia nanafoana ny “visa” [mg] an'ilay mpanao gazety Frantsay-Breziliana Manuela Picq.
Nitatitra ny blaogy Fanaovangazety ao Amerika Manontolo fa “mihamangejakokoa ao Ekoadaoro ny fankahalana ny mpanao gazety, ny media ary ny mpikatroka, ary mihamatetika kokoa ny famelezana ny fahalalahana maneho hevitra.”